NLD Flag ရဲ့အဓိပ်ပါယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aung San/Aung San Suu Kyi » NLD Flag ရဲ့အဓိပ်ပါယ်	7
NLD Flag ရဲ့အဓိပ်ပါယ်
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Sep 30, 2015 in Aung San/Aung San Suu Kyi, News, Politics, Issues |7comments
ခုတလော နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးမဲဆွယ်နေကြရာမှာ သက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီးရဲ့
အလံတွေကို သတိထားမိတော့ခပ်ဆင်ဆင်တွေ လည်းတွေ့နေရပါတယ်…
ဒီဟာမဟုတ်ဖူးနော်၊ မမှားကြနဲ့ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်တွေကနေ သတိပေးနေကြတာလည်း
NLD ကိုမဲထည့်မယ်..ဒို့ကတော့အမေစုရဲ့ခမောက်ပဲမဲပေးမယ် ပြောနေကြသတဲ့ဗျ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက NLDရဲ့အထိန်းအမှတ်တံဆိပ်က ခမောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုး
ဆိုတော့ ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကအရောက်ဆင်းရှင်းပြဟောပြော
NLD ရဲ့ အလံနဲ့သူ့အဓိပ်ပါယ်လေးတွေ့လို့ မှတ်တမ်းဖြစ်ရအောင်ယူလာပြီးတင်ပြချင်တာပါ
.ကွန်မန့်ထဲမှာ မအိက “ဗကသ အလံထဲက ခွပ်ဒေါင်းပုံလေးက လှတယ်
NLD ရဲ့အလံထဲက ခွပ်ဒေါင်းပုံက တုံးတိတိနဲ့ မလှမပ
အလံထဲက ခွပ်ဒေါင်းနဲ့ ကြယ်ဖြူက အနေထားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့
အဖွဲ့ချုပ်ကနေ အလံကို အတိကျသတ်မှတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်”….လို့ပြောထားလို့ NLD ရဲ့မူရင်းအလံပုံတင်ပေးလိုက်ပါတယ် D Myo Chit – ဒီ မျိုး ချစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့NLD အလံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ဘုံးက ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ကျမတို့ စပြီး ထူထောင်စဉ်ကတည်းက လူတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးကို အာမခံမယ့် ဒီမိုကရေစီစံနစ် ပေါ်ထွန်းဖို့ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ ထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ***** အဲ့ဒီတော့ အလံကိုကြည့်လိုက်လို့ ရှိရင် “အလံရဲ့အောက်ခံအရောင်က အနီရောင်” ပေါ့။ အနီရောင်ဟာ “သတ္တိ” ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် အတွင်းမှာ ဝင်ရောက်ပြီးတော့ လှုပ်ရှားဖို့ ဆိုတာ အင်မတန်မှ သတ္တိလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျမတို့ ဟာ အာဏာရှင်စံနစ်ကို စိန်ခေါ်တဲ့ အခါမှာ အန္တရာယ်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ဒီ့ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်တွေ အတော်များများဟာ အထိန်းသိမ်းခံရပါတယ်။ အထိန်းသိမ်းခံရတာ ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ တလမဟုတ်၊ တနှစ်မဟုတ် တချို့ ဆိုရင် အနှစ် ၂၀ အထိတောင် ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ဒီ့ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုပဲမက်လုံးပေးပြီး လွှတ်ပေးမယ်ပြောပြော ဒီမိုကရေစီအတွက် ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအတွက် ရပ်တည်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူအတွက်ရပ်တည်တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျမတို့ တဦးချင်း တယောက်ချင်း ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရခဲ့ပါဘူး၊ ကျမတို့ အဖွဲ့ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်တွေ တချို့ ဆိုလို့ ရှိရင် တချိန်တခါတုံးက အင်မတန်မှ အဆင်ပြေနေပေမယ့် နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ဆိုပြီးတော့ ဖိအားပေးတာတွေ မတရားသဖြင့် အရေးယူတာတွေကြောင့်မို့ လို့စီးပွါးရေး ပျက်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ ဟာ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ရှင်သန်ခဲ့တယ် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျမတို့ ”အလံရဲ့ နောက်ခံအနီ” ဆိုတာ “သတ္တိ” ကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ သတ္တိမရှိပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်လို့ မရပါဘူး။
***** နောက်တော့ ကျမတို့အလံမှာ “ကြယ်ဖြူကြီး” ရှိပါတယ်။ “ကြယ်ဖြူကြီး”ဆိုတာဟာ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ် “ဖြူစင်တဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်” ကိုရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ လွတ်လပ်ရေးကာလတုံးကလည်း ဒီကြယ်ဖြူကြီးကို တော်လှန်ရေးရဲ့သင်္ကေတ အနေနဲ့ကျမတို့ သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာကို အချို့ က အကြမ်းဖက်တဲ့ ကိစ္စလို့ထင်ကြတယ်။ ဒါမမှန်ပါဘူး။ တော်လှန်ရေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ စံနစ်တခု အပြောင်းအလဲတခုကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်တာဟာ တော်လှန်တာပါပဲ၊ တော်လှန်ရေးပဲ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ အပြောင်းအလဲကြီးမယ့်၊ ထိရောက်ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးကို တော်လှန်ရေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ အကြမ်းဖက်တဲ့တော်လှန်ရေး မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့တော်လှန်ရေး မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျမတို့ အဖွဲ့ ချုပ်ဟာ အကြမ်းဖက်ရေးကို လုံးဝမလုပ်ဖူး ဆိုတဲ့ မူနဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ ပါ။ ဘယ်လိုပဲကျတို့ ကို မတရားသဖြင့် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ပဲ တိုက်ခိုက် တိုက်ခိုက် ကျမတို့ ဘယ်တော့မှ အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ မတုံ့ ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ “ကြယ်ဖြူကြီး” ဟာ “ဖြူစင်တဲ့တော်လှန်ရေး စိတ်ဓါတ်” ရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ဆောင်ပါတယ်။
***** “ခွပ်ခေါင်း” ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ဒေါင်းဆိုတာ အင်မတန်မှ မင်္ဂလာရှိတဲ့ငှက် ဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာအရ ဒေါင်းကို အင်မတန်မှ တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါင်းဆိုတာ ကျက်သရေရှိတယ်၊ လှပတယ်၊ သတ္တိရှိတယ်။ ခွပ်ဒေါင်းဆိုတော့ ခွပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်၊
အဲ့ဒီတော့ တချို့ တွေက ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ ရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လားလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ လူငယ်များ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ လွတ်လပ်ရေးအတွက် လာပ်ခဲ့စဉ်တုံးကလည်း ခွပ်ဒေါင်းကို သင်္ကေတ အဖြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့ ရဲ့ “ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ” ဒီ “ခွပ်ဒေါင်း” ကို ကျမတို့ သုံးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ရွှေရောင်ခွပ်ဒေါင်းကြီး” ဆိုတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကြီး၊ တောက်ပြောင်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကြီး ပေါ့နော်……ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ တိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဆိုပေမယ့် ကျမကတော့ ကျမတို့ပြည်သူတွေ အမြဲပဲတိုက်နေခိုက်နေရမယ် ဆိုတဲ့ဟာတွေကို မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ဒါက ကျမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြောတာ မဟုတ်ဖူးနော်၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာကို ပြောတာ။ ပြည်သူတွေအတွက် ရှေ့ကနေပြီးတော့ နေပေးရမယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုကိစ္စတွေမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ရှေ့ကနေပြီးတော့ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၂၂/၉/၂၀၁၅ ကော့မှုးခရီးစဉ် သမင်ခြံကျေးရွာတွင် ဟောပြောခဲ့သည့် မိန်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ပါသည်)
CD to https://www.facebook.com/DMyoChit.page
၃၀၊ ၉၊ ၂၀၁၅
ဇီဇီခင်ဇော် says: အလံ တို့ လိုဂိုတို့ကတော့ မဲစာရွက်ထဲ ပါမှာ မို့သာ ကြည့်နေရတာ။
စု ရှိတဲ့ဘက် ပဲ လိုက်မှာ။
Ma Ei says: ဗကသ အလံထဲက ခွပ်ဒေါင်းပုံလေးက လှတယ်
အဖွဲ့ချုပ်ကနေ အလံကို အတိကျသတ်မှတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်
ဒါပေမယ့် အဓိကကတော့ အနီရောင်အောက်ခံမှာ ကြယ်ဖြူနဲ့ ခွပ်ဒေါင်းဝါ ကို မဲပေးကြပါလို့ နော်….
Mike says: .မအိရေ…အခုကပုံနှိပ်တိုက်တွေမှာကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ရိုက်နေကြလို့ အနည်းငယ်လွဲကြတာလို့ထင်တယ်
.NLD ရဲ့မူရင်းအလံကို ပန်းချီမောင်မောင်သိုက်ကဆွဲပေးသတဲ့…မူရင်းအလံပုံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
. ကျေးဇူးပါ ဇီဇီ နဲ့ မွအိရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: အစိမ်းရောင်ကမျက်စိအေးသဗျ
Mike says: .မွတ်@QUIL@ ဒချိဒချိ
@QUIL@ says: ပါပါမိုက်ကယဲ
ဆား ညော် သဂျီးကိုသာ ဒီလူဂျီး ဂွေးဇိအနာပေါက်ပါဇီပြောချင်ပြောမယ်
ဆားဖာတာ ဆား ဒါမျိုးမကြောက်လို့ ရွာရိုးလျောက်တယ်ဆိုပီး
မဲသွပ် တို့ တာမွေလူမိုက် ဇာယိတို့ ကပ်ပလီ လူဝင်စား မီးသွေးချောတို့နဲ့ သာသပ်ချင်သပ်မယ်
ပါပါမိုက် ကို မစော်ကားဘူးညော်
ဆား က လူလိမ်မာလေးဘာ ဒယ်ဒီပါပါး ခြစ်ဖေဖေရယ်
p.s ဟိုအင်ဂလိကန်က အာလဖွားကြီးသမီးကိုတော့ ရင်ထဲမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အားဟိ
Mike says: .ဟာဂျီ @QUIL@
.ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က ဆော်ဒီလူနင်းသေတဲ့အထဲပါသွားရမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.